I-Otkargo - Umsizi wokunakekela ingane yakho-Izindaba Nemicimbi-Ezokuthutha Zijabulise (Changzhou) Ebike Co., LTD
I-Otkargo - Umsizi wokunakekela ingane yakho
Isikhathi: 2021-04-27 Ukushaya: 7
Kulezi zinsuku, iyanda imindeni ethola ingane yesibili. Ibhayisikili elijwayelekile lingahlangabezana nezidingo zansuku zonke zomndeni onengane eyodwa. Ibhayisikili lezimpahla liphuma ukuxazulula inkinga yokuthi umama ufuna ukukhipha izingane ezimbili.
Ngomklamo wokulayisha wangaphambili, singenza ushintsho. Faka isihlalo nebhande ebhokisini langaphambili, kunesikhala sezingane ezimbili. Esikhathini esedlule, umama ubengathatha kuphela izinyane elilodwa ukugibela. Manje, izingane ezimbili ziyatholakala. Isihlalo sanele ngokwanele enganeni engaphansi kweminyaka eyishumi.
Amabhayisikili kagesi aphephe kakhulu kunamabhayisikili noma izithuthuthu futhi aqala ukusebenzisa amabhethri ahlanzekile, e-lithium. Ama-cargo ebikes angcono kakhulu. I-Ecargo kulula ukuqala kunebhayisikili elijwayelekile, futhi ingagijima ngokushesha kunama-commonones futhi, lapho ikhuphuka emthambekeni, ingonga amandla akho ngo-20% kuye ku-30%.
I-Otkargo yiyona engcono kakhulu ekuhambiseni ibanga elifushane lomndeni.
OLANDELAYO : ICargobike iguqula umhlaba